သူတစ်ပါးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို မ ချိုး ဖောက် ရ ဘူး ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဏကြီးကသူမကိုဆုံးမတဲ့အကြေင်း ပြန်ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင် စွမ်း ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်ဖြိုး သု က ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးကတည်းပင် ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝ င်သရုပ်ဆောင်ပြီး အနု ပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုချိန်မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက ဒါရိုက်တာ ဏ ကြီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
စိတ်တူ ကိုယ် တူရှိကြ တဲ့ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း နေ့ တိုင်း လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေ ပြုလုပ် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပိုင်ဖြိုးသု တို့ဇနီး မောင် နှံက သံရုံးတွေအရှေ့သွားပြီး သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြကာ တောင်းဆိုသလို ပြည်သူ့ဝန် ထမ်း တွေကိုလည်း ကူညီအားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ ပိုင်ဖြိုးသုကခင်ပွန်းဖြစ်သူဆီကနေ ဆုံးမစကား နားထောင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ပြန်ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပိုင်ဖြိုးသုက “ဦးဏကြီးကဆုံးမတယ်…ကိုယ်က လူ့အခွင့်အရေးအတွက် democracy အတွက် တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်…ကိုယ်ကစပြီးသူတစ်ပါးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုမချိုးဖောက်ရဘူး…သူများကိုမဆဲရဘူး personal attackမလုပ်ရဘူးတဲ့….ဘာကြည့်နေကြတာလဲ?ယူတို့ကိုအိုင် ကတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူး…အိုင့်အစားတစ်ယောက်စာပိုဆဲပေးကြ!!! ပို attackလုပ်ပေး ကြ လို့အကူညီတောင်းနေတာ… တစ်ယောက်စာပိုပိုသာသာလေးနော်.. အားကိုးမယ်နော်..ညီစေ နော် ! ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Source & Photo Credit -Paing Phyoe Thu’s FB Acc